दाङका ६ महिला सहकारीले बेचे दुई करोडका खसीबोका
दाङ । बडादशैंँका अवसरमा दाङका छ महिला सहकारीले करीब रु दुई करोडको खसीबोका उत्पादन गरेर बिक्री गरेका छन् । यस वर्षको दशैँमा सबैभन्दा बढी लमही नगरपालिका ९ रिहारमा रहेको कर्मठ सामाजिक उद्यमी महिला सहकारी संस्थाले रु ९० लाख ४१ हजार मूल्यका एक हजार ५३० खसीबोका बिक्री गरेको छ ।
उत्खनन् भएन दाङको पेट्रोल खानी
तुलसीपुर । विज्ञहरुको एक टोलीले अनुगमन गरेर २०२८ सालमै दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १३ मा पेट्रोल खानी रहेको दाबी गरेको थियो ।
मेसिनले मकै गोड्दै किसान
लमही । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना (मकै सुपरजोन) अन्तर्गत दाङको राजपुर गाउँपालिका वडा नं ५ सोनपुरुवामा मेसिनले मकै गोड्दै किसान । मेसिनले मकै गोड्न थालेपछि किसानलाई सहज भएको छ ।
गोरखनाथ मन्दिर जीर्ण भएपछि मन्दिर पुनः निर्माण
दाङ । दाङ दंगीशरण गाउँपालिका–७ श्रीगाउँस्थित सिद्धबाबा गोरखनाथ मन्दिर जीर्ण भएपछि पुरातत्व विभागद्वारा पुनः निर्माण गरिँदै ।
दाङकाे कारगारबाट गणतन्त्र दिवसकाे अवसरमा १६ कैदीकाे सजाय माफी
घोराही । गणतन्त्र दिवसका अवसरमा दाङमा रहेका दुई कारागारमा रहेका १६ जना कैदीहरुको सजाय माफी भएको छ । गणतन्त्र दिवसका अवसरमा असल चालचलन रहेका १६ जनालाई कैद सजाय माफी भएको जनाइएको छ ।
उपचारका क्रममा शिशुको मृत्यु भएपछि मेडिकल सञ्चालक पक्राउ
लमही । उपचारका क्रममा शिशुको मृत्यु भएपछि दाङमा एक मेडिकल सञ्चालक पक्राउ परेका छन् ।
चुनाव जितेपछि पटाैली नाका फर्किएनन् जनप्रतिनिधि
दाङ । दाङको सिमाक्षेत्र पटौलीनाकाका वासिन्दाले चुनाव जितेपछि कुनै जनप्रतिनिधि नआएको बताएका छन् । निर्वाचनको समयमा प्रचारका क्रममा पटौली नाका पुगेका उम्मेदवारहरु चुनाव जितेपछि एक पटक पनि देखा नपरेका बताएका हुन् ।
राजधानीका लागि दाङकाे विकल्प नभएकाे सुझाव
दाङ । प्रदेश नं. ५ को स्थायी राजधानी र नामकाबारेमा यहाँ सुझाव सङ्कलनार्थ आएको प्रदेशसभा सदस्य तथा विशेष समितिको टोलीसँग संवाद समिति दाङले आज अन्तरक्रिया गरेको छ ।
दाङ दुर्घटनामा मृत्यु भएका सबै ३० वर्षमुनिका, मृतकमध्ये १४ जनाकाे सनाखत (नामावली सहित)
बुटवल । दाङमा शुक्रबार साँझ भएको बस दुर्घटनाका २३ मृतकमध्ये १४ जनाको सनाखत भएको छ ।
दाङमा दुर्इ विमानस्थल चाँडै सञ्चालनमा आउने : सभामुख महरा
लमही । सङ्घीय संसद्का सभामुख कृष्णबहादुर महराले दाङमा दुई विमानस्थल सञ्चालनमा आउने बताएका छन् ।